လကျရှိရညျးစားကွီး ရှိရဲ့နဲ့တောငျ ဖောကျပွနျခဲ့ကွတဲ့ ယှနျးယှနျးနဲ့စညျသူဝငျး အကွောငျး အားလုံးသိအောငျ ခပြွလာတဲ့ စညျသူဝငျးရဲ့ ခဈြသူကောငျမလေး – Shwe Likes
သရုပျဆောငျ စညျသူ ဝငျးနဲ့ ယှနျးယှနျးတို့ ကတော့ Double Dating ဆိုတဲ့ အ စီအစဉျမှာ အတူ တကှ အလုပျလုပျကိုငျရငျး ရငျးနှီးခဲ့ကွတွာ ဖဈပါတယျ။ Double Dating အစီအစဉျမှာ ယှနျးယှနျး က အော ငျမငျးခနျ့ရဲ့ ပါတနာဖွဈ သလို စညျသူဝငျး ကလညျး သဇငျထူးမွ ငျ့ရဲ့ ပါတနွာ ဖဈခဲ့ပါတယျ။
ပရိသတျေ တှကလညျး Double Dating အစီအ စဉျထဲက အတှဲလို ကျအတိုငျး စညျသူဝငျးနဲ့ သဇငျထူးမွငျ့ကို သဘော တူခဲ့ကွပမေယျ့ တက ယျ့လကျတှမှေ့ာေ တာ့ ရညျးစားရှိ တဲ့ စညျသူဝငျးနဲ့ လူမှုေ ရးဖောကျပွနျ မှုတှရှေိခဲ့တာ ယှနျးယှနျး သာဖွဈကွောငျး စညျသူ ဝငျးရဲ့ခဈြသူေ ကာငျ မလေးက အခု လိုပဲခပြွလာပါတယျ။
“အောကျတနျး ကတြဲ့ လုပျရကျတှေ လုပျခံရမယျလို့ ဘဝမှာမ ထငျခဲ့ဘူး ဒီလိုမြိုးတခါမှ မကွုံဘူးခဲ့ဘူး လူ့ပတျဝနျးကငျြမှာနပေီး စညျးမစောငျ့ ကွတာ အံဩလှနျးလို့ မိ နျးကလေးခငျြး ကိုယျခငျြးမစာနာပဲ သိရကျနဲ့ လုပျရကျကွလို့ကိုး တငျတာ အားလုံးကို ဘာမှမပွောပဲ ကိုယျပဲ တသကျလုံး ၆နှဈနီးပါး ငွိမျခံေ ပးနတော မပွောတ တျလို့မဟုတျဘူး သိက်ခာကမြှာစိုးလို့ ကာကှ ယျပေးနခေဲ့တာ အခုဒါတှတေ ငျရတယျဆိုတာလဲ အစထဲက လကျလှတျေ ပးပီးသားမို့ ၂ ယောကျလုံး လှတျလှတျ လပျလပျကွိုကျလို့ ရတယျ တှဲလို့ ရတယျ တမျးတမနဘေူး အခု လကျလှတျပေး ထှကျသှားပေးဆို တာ ထှကျမသှားပဲ ငါ့ကို လိုကျနှောငျ့ယှ ကျနလေို့တငျတာ ငါ့ကို လာမိုကျ ရိုငျးနကွေလို့တ ငျတာ ”
“အဲဒီ program စထဲကနေ အခုထိ ဆဲခံဆိုခံေ န့တိုငျး messenger ကနေ အဲ fan တှဆေဲ တာနတေို့ငျး ခံခဲ့ရပမေဲ့ အပွုံးမပကျြ သီးခံပေးခဲ့တယျ ။ စစထဲက သူတို့ပဲ ဝိုငျးေ ပးစားပီး ကိုယျ့ဟာကိုေ နတာကိုလဲ သပျသပျကွီးတှေ ဆဲခံရတာကို ကိုယျ့ဘကျမှာ မရှိပဲ အောငျမွငျမှုမှာသာယာေ နခဲ့လို့ ဘာတခှနျး မှမပွောပဲ လှတျပေး ခဲ့တယျ ကိုယျ့ဘဝနဲ့ ကိုယျနကွေရအောငျဆိုပီး Jan31 မှာစပွတျ သှားတယျ အဲထဲက တောကျလြှောကျ ဖုနျးတှဆေကျ တောငျးပနျ အိမျတှလော သှားလရောလိုကျပီး ပွုပွငျပါ့မယျ ပွောငျးလဲပါ့ မယျ မရှိပဲ မနနေိုငျပါဘူး
ပါးစပျကတောကျလြှောကျ ပွောတယျနျော သူတို့စကားပွောပုံ အရဆိုရငျ နငျတို့ စကွိုကျတာ FEB17 တဲ့ ရှံလို့သေေ တာ့မယျ ငါကဖွတျလို့ ငါနဲ့မခှဲနို ငျလို့ နှဈသိမျ့ပေး တာတဲ့ ရိုငျးရိုငျးပွောရရငျ ဟိုဘကျကတေ ယာကျကလဲ သိရကျသားနဲ့ဖွဈကွတယျ ဒီကွားထဲ နငျတို့တှဘေ ယျလိုတှေ ဖွဈဖွဈငါနဲ့မဆိုငျလို့ သီးခံပေးနို ငျသေးတယျ အခုတော့ ငါနဲ့ပွနျတှဲမယျဆိုပီး ငါ့မှေးနပေီ့းတော့ ဆုံးဖွတျကွတယျ အဲဒီထိကိုး ဟိုဘကျကမိနျးမက မှေးနမှေ့ာသခြော လုပျပေးဦး အဆငျပွလေား ဘဘေီကရတယျနျောဆိုပီး ပွောနပွေတာ ”
“အောကျတနျး ကလြိုကျကွတာ .. ငါမသိရငျဘ ယျခြိနျထိခံရမှာလဲ ?? ငါနဲ့ပွနျတှဲမယျဆို ပီး ငါ့စီလာ ငါနဲ့ ခရီးပါလိုကျပီး နငျတို့က ငါ့ဘေးမှာ ထားပီး miss u koko love u babe ခရီးမှာေ ပျြာခဲ့နျော ဘာဝယျခဲ့ရမ လဲနဲ့ ဖွဈနကွေတာ ဘယျလိုစိတျနဲ့လဲဟမျ?? ငါနဲ့ရှိနပေီး 9months anniversary တဲ့ စိတျဓာတျေ တှက ရှကျဖို့ကောငျး လိုကျတာ ငါနဲ့ပွနျတှဲမယျဆို ဖွတျလေ မဖွတျပဲ ၂ ယောကျလုံးသိရကျနဲ့ ခှေးဇာ တျခငျးကွတာ .. ငါလဲ မဆှဲချေါထားဘူး နငျ့ဘာနငျငါနဲ့မ ခှဲနိုငျဘူးဆိုပီး ပွနျလာတယျ ပီးတော့ ဖောကျပွနျတယျ .. ဟိုဘကျကလဲ လကျခံတယျ.. ”
“ဒီကွားထဲ ဝရမျးပါလို့ ပွေးရတယျ ကိုဗဈဖွဈတယျ ပွတျနတောေ တာငျ လကျကနျြသံယောဇဉျနဲ့ ငါ့ဘကျက အတတျနိုငျဆုံး အကုနျလုပျပေးခဲ့ တယျ သူငယျခငျြးတှကေ နငျအမှတျမရှိဘူး လားပွောတာေ တာငျ ကာကှယျပေးခဲ့တယျ နမေကောငျးရ ငျတောငျ ဆေးစားစရာလို အပျတာတှေ သှားပို့ ဖွညျ့ဆ ညျးပေးခဲ့တယျ ဒါတှပွေောနရေတာ နာမညျကောငျးယူနတောမဟုတိဘူး
နငျ့မိသားစုနငျ့ အသိုငျး ဝိုငျးအကုနျလုံး ငါဘယျလော ကျကောငျးလဲ အသိဆုံး ၆နှဈ တခါမှခပြွပီး မပွောဘူးဘူး ငါတခါမှ မဖေါကျပွနျဘူးဘူး နငျ့အတိတျတှလေဲ စိတျမဝငျစားအကု နျအကောငျးပွုပွငျပေး မယျဆိုတဲ့စိတျနဲ့ တှဲခဲ့တာ အခုတော့ ရငျနာလှနျးလို့ ကိုယျကဘယျေ လာကျကောငျးကောငျး လုပျရကျတာ ပဲဆိုတာ သိသှားလို့ နာကညျြးလှနျးလို့ အရှကျခှဲတာ မဟုတိဘူး နငျတို့ရဲ့ အောကျတနျးကြ တဲ့လုပျရကျတှကေို မွငျစခေငျြတာ ငါဘယျလိုခံစားရမလဲ ဆိုတာသိစခေငျြတာ ”
“ကွားထဲ နငျတို့ ဖွဈပကျြနေ တာတှလေဲ မသိဘူး စိတျမဝငျစားခဲ့ဘူး ပွတျနတေဲ့ အခြိနျမှာ .. ပွနျလကျခံပေးတဲ့အခြိနျထိ ဖွဈပကျြေ နကွတာ ဘယျလိုမှ လကျမခံနိုငျတဲ့ အောကျတနျးကတြဲ့လုပျရကျတှပေဲ အစထဲက သိခဲ့ရငျ ပွနျတောငျလကျမခံေ ပးဘူး ရှံလှနျးလို့ တယော ကျကလဲ အသဲသနျပွနျလာခငျြတယျ နောကျတယောကျကလဲ အဲဒါကိုလကျခံပေးပီး ကွိတျပီးဖွဈနကွေတယျ စိတျဓာ တျတှကေ အောကျ တနျးကလြှနျးလို့ အျောဂလီဆနျတယျ။
အမကတော့ ဟနျမဆောငျတတျသလို two faced လဲမလုပျတတျဘူး အရှိတိုငျးကို လူတိုငျးကိုစိတျရငျးနဲ့ပဲဆကျဆံဘူးတယျ broken family ကလာလို့ မတ်ေတာငတျလို့ တယောကျထဲဘဝမှာဆိုပီး တှယျတာခဲ့တယျ တယောကျထဲရုနျးကနျရလို့ အနားမှာကိုယျ့ကို ခဈြရငျပီးရောဆိုပီး တခွားဘာမှ မလိုအပျလို့ တှယျတာခဲ့မိတယျ
အခုတော့ ပကျသ ကျမိခဲ့တဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုပါ ရှံတယျ နိုငျငံရေးေ တှဖွဈနတေဲ့ကွားထဲ အားလုံးကို အနှောငိ့ယှကျဖွဈသှားေ စလဲတောငျး ပနျပါတယျ ဒီလို RS ထဲက အရမျးရုံးထှကျခငျြနပေီမို့ပါ မိုကျရိုငျးနတောတောငိ လကျမလှတျပေးနိုငျကွပဲ ဆကျပီးမိုကျရိုငျးတာတှခေံနရေလို့ပါ လကျလှတျပေးပါတော့ တောငျးပနျပါတယျ” ဆိုပွီး ပွောလာတာဖွဈပါတယျ။ Source: Myat Noe Eain’s fb
သရုပ်ဆောင် စည်သူ ဝင်းနဲ့ ယွန်းယွန်းတို့ ကတော့ Double Dating ဆိုတဲ့ အ စီအစဉ်မှာ အတူ တကွ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်း ရင်းနှီးခဲ့ကြတြာ ဖစ်ပါတယ်။ Double Dating အစီအစဉ်မှာ ယွန်းယွန်း က အော င်မင်းခန့်ရဲ့ ပါတနာဖြစ် သလို စည်သူဝင်း ကလည်း သဇင်ထူးမြ င့်ရဲ့ ပါတနြာ ဖစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်ေ တွကလည်း Double Dating အစီအ စဉ်ထဲက အတွဲလို က်အတိုင်း စည်သူဝင်းနဲ့ သဇင်ထူးမြင့်ကို သဘော တူခဲ့ကြပေမယ့် တက ယ့်လက်တွေ့မှာေ တာ့ ရည်းစားရှိ တဲ့ စည်သူဝင်းနဲ့ လူမှုေ ရးဖောက်ပြန် မှုတွေရှိခဲ့တာ ယွန်းယွန်း သာဖြစ်ကြောင်း စည်သူ ဝင်းရဲ့ချစ်သူေ ကာင် မလေးက အခု လိုပဲချပြလာပါတယ်။
“အောက်တန်း ကျတဲ့ လုပ်ရက်တွေ လုပ်ခံရမယ်လို့ ဘဝမှာမ ထင်ခဲ့ဘူး ဒီလိုမျိုးတခါမှ မကြုံဘူးခဲ့ဘူး လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေပီး စည်းမစောင့် ကြတာ အံဩလွန်းလို့ မိ န်းကလေးချင်း ကိုယ်ချင်းမစာနာပဲ သိရက်နဲ့ လုပ်ရက်ကြလို့ကိုး တင်တာ အားလုံးကို ဘာမှမပြောပဲ ကိုယ်ပဲ တသက်လုံး ၆နှစ်နီးပါး ငြိမ်ခံေ ပးနေတာ မပြောတ တ်လို့မဟုတ်ဘူး သိက္ခာကျမှာစိုးလို့ ကာကွ ယ်ပေးနေခဲ့တာ အခုဒါတွေတ င်ရတယ်ဆိုတာလဲ အစထဲက လက်လွှတ်ေ ပးပီးသားမို့ ၂ ယောက်လုံး လွတ်လွတ် လပ်လပ်ကြိုက်လို့ ရတယ် တွဲလို့ ရတယ် တမ်းတမနေဘူး အခု လက်လွှတ်ပေး ထွက်သွားပေးဆို တာ ထွက်မသွားပဲ ငါ့ကို လိုက်နှောင့်ယှ က်နေလို့တင်တာ ငါ့ကို လာမိုက် ရိုင်းနေကြလို့တ င်တာ ”
“အဲဒီ program စထဲကနေ အခုထိ ဆဲခံဆိုခံေ န့တိုင်း messenger ကနေ အဲ fan တွေဆဲ တာနေ့တိုင်း ခံခဲ့ရပေမဲ့ အပြုံးမပျက် သီးခံပေးခဲ့တယ် ။ စစထဲက သူတို့ပဲ ဝိုင်းေ ပးစားပီး ကိုယ့်ဟာကိုေ နတာကိုလဲ သပ်သပ်ကြီးတွေ ဆဲခံရတာကို ကိုယ့်ဘက်မှာ မရှိပဲ အောင်မြင်မှုမှာသာယာေ နခဲ့လို့ ဘာတခွန်း မှမပြောပဲ လွှတ်ပေး ခဲ့တယ် ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ကိုယ်နေကြရအောင်ဆိုပီး Jan31 မှာစပြတ် သွားတယ် အဲထဲက တောက်လျှောက် ဖုန်းတွေဆက် တောင်းပန် အိမ်တွေလာ သွားလေရာလိုက်ပီး ပြုပြင်ပါ့မယ် ပြောင်းလဲပါ့ မယ် မရှိပဲ မနေနိုင်ပါဘူး
ပါးစပ်ကတောက်လျှောက် ပြောတယ်နော် သူတို့စကားပြောပုံ အရဆိုရင် နင်တို့ စကြိုက်တာ FEB17 တဲ့ ရွံလို့သေေ တာ့မယ် ငါကဖြတ်လို့ ငါနဲ့မခွဲနို င်လို့ နှစ်သိမ့်ပေး တာတဲ့ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ဟိုဘက်ကတေ ယာက်ကလဲ သိရက်သားနဲ့ဖြစ်ကြတယ် ဒီကြားထဲ နင်တို့တွေဘ ယ်လိုတွေ ဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်လို့ သီးခံပေးနို င်သေးတယ် အခုတော့ ငါနဲ့ပြန်တွဲမယ်ဆိုပီး ငါ့မွေးနေ့ပီးတော့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ် အဲဒီထိကိုး ဟိုဘက်ကမိန်းမက မွေးနေ့မှာသေချာ လုပ်ပေးဦး အဆင်ပြေလား ဘေဘီကရတယ်နော်ဆိုပီး ပြောနေပြတာ ”
“အောက်တန်း ကျလိုက်ကြတာ .. ငါမသိရင်ဘ ယ်ချိန်ထိခံရမှာလဲ ?? ငါနဲ့ပြန်တွဲမယ်ဆို ပီး ငါ့စီလာ ငါနဲ့ ခရီးပါလိုက်ပီး နင်တို့က ငါ့ဘေးမှာ ထားပီး miss u koko love u babe ခရီးမှာေ ပျာ်ခဲ့နော် ဘာဝယ်ခဲ့ရမ လဲနဲ့ ဖြစ်နေကြတာ ဘယ်လိုစိတ်နဲ့လဲဟမ်?? ငါနဲ့ရှိနေပီး 9months anniversary တဲ့ စိတ်ဓာတ်ေ တွက ရှက်ဖို့ကောင်း လိုက်တာ ငါနဲ့ပြန်တွဲမယ်ဆို ဖြတ်လေ မဖြတ်ပဲ ၂ ယောက်လုံးသိရက်နဲ့ ခွေးဇာ တ်ခင်းကြတာ .. ငါလဲ မဆွဲခေါ်ထားဘူး နင့်ဘာနင်ငါနဲ့မ ခွဲနိုင်ဘူးဆိုပီး ပြန်လာတယ် ပီးတော့ ဖောက်ပြန်တယ် .. ဟိုဘက်ကလဲ လက်ခံတယ်.. ”
“ဒီကြားထဲ ဝရမ်းပါလို့ ပြေးရတယ် ကိုဗစ်ဖြစ်တယ် ပြတ်နေတာေ တာင် လက်ကျန်သံယောဇဉ်နဲ့ ငါ့ဘက်က အတတ်နိုင်ဆုံး အကုန်လုပ်ပေးခဲ့ တယ် သူငယ်ချင်းတွေက နင်အမှတ်မရှိဘူး လားပြောတာေ တာင် ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ် နေမကောင်းရ င်တောင် ဆေးစားစရာလို အပ်တာတွေ သွားပို့ ဖြည့်ဆ ည်းပေးခဲ့တယ် ဒါတွေပြောနေရတာ နာမည်ကောင်းယူနေတာမဟုတိဘူး
နင့်မိသားစုနင့် အသိုင်း ဝိုင်းအကုန်လုံး ငါဘယ်လော က်ကောင်းလဲ အသိဆုံး ၆နှစ် တခါမှချပြပီး မပြောဘူးဘူး ငါတခါမှ မဖေါက်ပြန်ဘူးဘူး နင့်အတိတ်တွေလဲ စိတ်မဝင်စားအကု န်အကောင်းပြုပြင်ပေး မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ တွဲခဲ့တာ အခုတော့ ရင်နာလွန်းလို့ ကိုယ်ကဘယ်ေ လာက်ကောင်းကောင်း လုပ်ရက်တာ ပဲဆိုတာ သိသွားလို့ နာကျည်းလွန်းလို့ အရှက်ခွဲတာ မဟုတိဘူး နင်တို့ရဲ့ အောက်တန်းကျ တဲ့လုပ်ရက်တွေကို မြင်စေချင်တာ ငါဘယ်လိုခံစားရမလဲ ဆိုတာသိစေချင်တာ ”
“ကြားထဲ နင်တို့ ဖြစ်ပျက်နေ တာတွေလဲ မသိဘူး စိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူး ပြတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ .. ပြန်လက်ခံပေးတဲ့အချိန်ထိ ဖြစ်ပျက်ေ နကြတာ ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်တဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရက်တွေပဲ အစထဲက သိခဲ့ရင် ပြန်တောင်လက်မခံေ ပးဘူး ရွံလွန်းလို့ တယော က်ကလဲ အသဲသန်ပြန်လာချင်တယ် နောက်တယောက်ကလဲ အဲဒါကိုလက်ခံပေးပီး ကြိတ်ပီးဖြစ်နေကြတယ် စိတ်ဓာ တ်တွေက အောက် တန်းကျလွန်းလို့ အော်ဂလီဆန်တယ်။
အမကတော့ ဟန်မဆောင်တတ်သလို two faced လဲမလုပ်တတ်ဘူး အရှိတိုင်းကို လူတိုင်းကိုစိတ်ရင်းနဲ့ပဲဆက်ဆံဘူးတယ် broken family ကလာလို့ မေတ္တာငတ်လို့ တယောက်ထဲဘဝမှာဆိုပီး တွယ်တာခဲ့တယ် တယောက်ထဲရုန်းကန်ရလို့ အနားမှာကိုယ့်ကို ချစ်ရင်ပီးရောဆိုပီး တခြားဘာမှ မလိုအပ်လို့ တွယ်တာခဲ့မိတယ်
အခုတော့ ပက်သ က်မိခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပါ ရွံတယ် နိုင်ငံရေးေ တွဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲ အားလုံးကို အနှောငိ့ယှက်ဖြစ်သွားေ စလဲတောင်း ပန်ပါတယ် ဒီလို RS ထဲက အရမ်းရုံးထွက်ချင်နေပီမို့ပါ မိုက်ရိုင်းနေတာတောငိ လက်မလွှတ်ပေးနိုင်ကြပဲ ဆက်ပီးမိုက်ရိုင်းတာတွေခံနေရလို့ပါ လက်လွှတ်ပေးပါတော့ တောင်းပန်ပါတယ်” ဆိုပြီး ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။ Source: Myat Noe Eain’s fb
မင်ျဂလာနှဈပတျ လညျနလေ့ေးမှာ အလနျးစား နဲ့ အပီအပွငျရိုနတေဲ့ ပုံလေးခပြွလာတဲ့ စမိုငျးလျ
မထငျမှတျထားခြိနျမှာ ရုတျတရကျ ထှကျပျေါလာတဲ့ ပိုငျတံခှနျနဲ့ ဆိုဖီယာတို့ရဲ့ အနမျးတှပေေးနတေဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ခဈြသူသကျတမျး (၁၁) နှဈတိုငျတိုငျ မပွောငျးလဲပဲ လုပျမိနဆေဲဖွဈတဲ့ အကငျြ့လေး တဈခုကို ပွောပွလာတဲ့ ကြျောထှဋျဆှေ